तालिबानका कुन नेताले सम्हाल्लान् अफगानिस्तानको सत्ता ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवानले देशका सबै प्रमुख शहरहरु र राजधानी काबुलसमेत कब्जामा लिएको छ । राष्ट्रपति अशरफ घानी र उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेहले देश छाडिसकेका छन् । पुरानो सत्ता ढलेसँगै अब अफगानिस्तानको सत्ता कुन तालिवानी नेताले सम्हाल्लान् त ? तालिवानको नेतृत्व गर्दै आएका मुल्ला अब्दुल घानी बरादर र हिब्तुल्लाह अखुदजादा मध्ये एकले सत्ता सम्हाल्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ ।
पछि सन् २०१० को फेब्रअरीमा अमेरिका र पाकिस्तानले गरेको संयुक्त अभियानमा उनी पाकिस्तानको कराँची शहरबाट पक्राउ परेका थिए ।सन् २०१२ सम्म मुल्लाका बारेका खासै चर्चा थिएन । अफगानिस्तानी सरकारलाई शान्ति वार्ताका लागि बन्दीहरुको रिहाईको माग गरिएको समयमा मुल्लाको नाम सबैभन्दा अगाडि आउने गथ्र्यो ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानी सरकारले उनलाई रिहा गरिदिएको थियो । तर, त्यसपछि उनी पाकिस्तानमै रहे वा अन्यत्र गए भन्ने विषय भने अस्पष्ट थियो । मुल्ला बरादर तालिवानी नेता मुल्ला मोहम्मद उमरका सबैभन्दा नजिकका थिए । उनीमाथि मुल्ला मोहम्मद उमरको भरोसा थियो ।
तालिवानका अन्य नेताहरुलाई जस्तै मुल्ला बरादरलाई पनि संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनीमाथि विदेश यात्रा गर्न र हतियार खरिद गर्न प्रतिबन्ध थियो । सन् २०१० मा पक्राउ पर्नुभन्दा पहिले उनले सार्वजनिक बयान दिएका थिए । उनले सन् २००९ मा इमेलमार्फत न्यूजवीक पत्रिकालाई जवाफ पनि दिएका थिए ।
अफगानिस्तानमा भएको अमेरिकाको उपस्थितिमाथि पनि उनले प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनले अमेरिकाले धेरैभन्दा धेरै नोक्सान पुर्याउन चाहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । उनले आफ्नो जमिनमा दुश्मनको अन्त्य नभएसम्म जिहाद (मुश्लिम धर्मअनुसार दुष्टहरुको विनाशका लागि धार्मिक युद्ध) चलिरहने बताएका थिए ।
उनले हत्यारा, अवैध सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति, चोरी गर्ने आदिको हात काटेर सजायँ दिनुपर्ने आदेश दिएका थिए । हिब्तुल्लाह तालिवानका पूर्वप्रमुख अख्तर मोहम्मद मन्सुरका प्रतिनिधि पात्र थिए । मन्सुरको सन् २०१६ को अमेरिकी ड्रोन ह’मलामा मृत्यु भयो । मन्सुरले हिब्तुल्लाहलाई आफ्नो हकदार घोषित गरेका थिए ।
करिब आठ वर्ष हिब्तुल्लाहले अफगानिस्तानमा बिताए । उनको क्वेटामा शुरा समूहसँग पनि नजिकको सम्बन्ध रह्यो । हिब्तुल्लाहको नाम मायने हो । उनी नुरजाई कबीलेसँग सम्बन्ध राख्छन् । बीबीसी